Tonga ny KDE Plasma 5.17 miaraka amin'ny fanatsarana, fanatsarana ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Ny KDE Plasma 5.17 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana, fanatsarana ary maro hafa
Darkcrizt | | Fisehoana / personalization
Andro maromaro lasa izay Ny tetikasa KDE dia nanambara ny famoahana ny tontolon'ny birao KDE Plasma 5.17. IZA mitondra fiasa sy fanatsarana vaovao maro. Plasma 5.17 dia fanavaozana lehibe famoahana izany manatsara ny fahombiazan'ny background hanatsarana ny singa maro endri-javatra lehibe eo am-panolorana endri-javatra vaovao izay mahatonga ny KDE Plasma ho marin-toerana kokoa ary manolotra traikefa tsara kokoa.
Ny KDE Plasma dia heverin'ny maro ho iray amin'ireo DE haingana indrindra misy eny an-tsena ankehitriny ary iza no mahay mandanjalanja ny fampiasana fitaovana. Ankehitriny dia mihombo haingana kokoa ny rafitra, satria ny ekipa dia nanova ny script startup avy amin'ny Bash ho C ++, mamela ny famonoana miaraka.
Ny ekipan'ny fampandrosoana dia manamafy fa haingana kokoa izy io.
"Anisan'ireo fanatsarana maro hafa, ny script fanombohana dia navadika avy amin'ny Bash (hadika tsimoramora) ho C ++ (fiteny haingam-pandeha) ary ankehitriny dia mihodina tsy mitambatra. Midika izany fa afaka manao asa marobe miaraka izy ireo nefa tsy mila manatanteraka azy ireo tsirairay avy. Vokatr'izany dia nihena be ny fotoana ilaina miala amin'ny efijery fidirana mankany amin'ny birao feno entana.
Anisan'ireo zava-baovao lehibe amin'ity kinova vaovao ity, manana fanohanana ny lokon'ny alina izahay (ny rafitra fanamafisana ny loko) ao amin'ny X11. Ny Office Plasma dia manaiky ihany koa rehefa manao fampisehoana iray ianao ary mijanona ny hafatra miseho eo afovoan'ny sary mihetsika.
Ny zava-baovao iray hafa dia izany raha mampiasa Wayland, Plasma dia manolotra ambaratonga hafa, izay midika fa ny biraonao rehetra, ny varavarankely, ny endritsoratra ary ny takelaka misy anao dia azo refesina tsara amin'ny monitor HiDPI anao.
Ankoatr'izay KWin mpitantana varavarankely dia manome horonam-peo marina miaraka amin'ny kodia totozy amin'ny tontolo miorina amin'ny Wayland.
Ho an'ny X11, ny fahaizana mampiasa ny lakilen'ny Meta ho mpanova ny famindrana windows dia nampiana (raha tokony Alt + Tab). Safidy iray no nampiana izay mametra ny fampiasana ny fampisehoana fampisehoana amin'ny toerana aseho ihany ankehitriny amin'ny fananganana multi-monitor. Ao amin'ny vokatra "Present Windows", nanampy ny fanidiana varavarankely misy tsindry totozy afovoany.
Ho an'ny raharaha momba ny ny interface ny fametrahana ny widget, izay nohatsaraina tamin'ity Malagasy Bible, izay namboarina ihany koa ho an'ny efijery mikasika.
Rehefa misolo tena endritsoratra, Ny maody fampiasa RGB dia alefa tsy mandeha (Ny maody "Mampiasà anti-aliasing" dia alefa ao anaty fikirana, ny safidy "Karazan-tsary rendering" azo ovaina "RGB" sy "Hinting style" mankany "Slight").
Naseho koa tamin'ity kinova vaovao an'ny KDE Plasma ity, izay nohafohezina ny fotoana fanombohana birao.
KRunner sy Kickoff dia nanampy fanampiana amin'ny famadihana ireo singa mpizara (ohatra 3/16 santimetatra = 4.76 mm). Raha ho an'ny maody fanovana mavitrika ny tontolon'ny birao dia nanjary azo natao ny namaritra ny filaharan'ny sary (talohan'ny niovan'ny kisendrasendra fotsiny).
Nanampy ny fahaizana mampiasa ny sarin'ny andro avy amin'ny serivisy Unsplash ho toy ny tontolon'ny birao miaraka amin'ny fahaizana misafidy sokajy.
Ny System Monitor dia nanampy fanampiana amin'ny fampisehoana fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny cgroup mba hanombanana ny fetran'ny loharano ao anaty kaontenera. Ho an'ny fizotrany tsirairay, aseho ny statistika momba ny fifamoivoizana tambajotra mifandraika amin'izany. Nanampy ny fahaizana mijery antontan'isa ho an'ny NVIDIA GPU.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity kinova vaovao ity ianao dia afaka manatona ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana KDE Plasma amin'ny Linux?
Ho an'ireo liana te-hametraka ity kinova vaovao momba ny tontolo iainana ity, azon'izy ireo atao izany amin'ny alàlan'ny fandefasana ireto baiko manaraka ireto ao anaty terminal.
Ho an'ireo mpampiasa Debian, Ubuntu ary ny derivatives dia tsy maintsy manoratra ireto manaraka ireto fotsiny izy ireo:
sudo apt-mahazo mametraka plasma-desktop -y
Ho an'ireo mpampiasa Arch Linux sy ny derivatives:
Fedora sy ny derivatives:
sudo dnf -y vondrona dia mametraka ny "KDE Plasma Workspaces"
OpenSUSE / SUSE:
sudo zypper mametraka-lamina kde kde_plasma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny KDE Plasma 5.17 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana, fanatsarana ary maro hafa
Hitan'izy ireo fa marefo ao Sudo izay mamela ireo mpampiasa tsy nahazo alalana hihetsika ho faka
Navoaka sahady ny kinova vaovao an'ny Ubuntu 19.10 Eoan Ermine